Shakhsiyeynta Safarka Dukaameysiga Macaamiisha | Martech Zone
Shakhsiyeynta Safarka Dukaameysiga Macaamiisha
Jimcaha, Sebtember 25, 2015 Jimcaha, Sebtember 25, 2015 Laura Swanson
U jaangooynta khibrada dukaameysiga macaamiisha shaqsiyadeed maahan fikrad cusub. Kaliya ka fikir dareenka aad heleyso markii aad booqato makhaayad maxalli ah oo adeegto ay xasuusato magacaaga iyo kanaga caadiga ah. Waxay dareemeysaa wanaag, sax?
Shakhsiyeyn shakhsi ahaaneed waxay ku saabsan tahay dib u sameynta taabashadaas shakhsi ahaaneed, oo u muujisa macmiilka inaad fahamsan tahay oo aad daryeesho iyada. Teknolojiyada ayaa laga yaabaa inay awood u siiso xeeladaha shakhsi ahaaneed, laakiin shakhsi ahaanshaha dhabta ahi waa istiraatiijiyad iyo maskax ka muuqata macaamil kasta oo macaamiil ah oo leh astaantaada.
Si ka fudud ayaa loo yidhi. Tafaariiqleyda iyo noocyadu waxay la halgamayaan halka laga bilaabayo, waxa mudnaanta la siinayo iyo xalka looga faa’iideysanayo. At FitForCommerce, macaamiisheennu waxay inta badan weydiiyaan "Maxaan sameyn karaa si aan u shakhsiyeeyo khibradda macaamiisha?" Sidaad filan laheyd, ma jiro xal “hal-cabbir-dhan-ah”.
Bixinta khibradaha dukaamaysiga ee shaqsiyan - illaa kumanaan ama boqolaal kun oo rajooyin iyo macaamiisha hadda jirta - waxay u baahan tahay ka faa’iideysiga xog-is-weydaarsi casri ah, habab iyo farsamooyin. Taasi waxay dareemi kartaa wax culus. Dabcan, tafaariiqleydu waxay geyn karaan teknoolojiyad cusub oo awood u siineysa inay sameeyaan baaritaanka A / B, ururiyaan xogta, ama shakhsiyeeyaan suuqgeynta iimaylka ama khibradaha goobta. Laakiin, iyada oo aan la helin istiraatiijiyad guud, xeeladahaasi way ka fog yihiin sida ugu habboon.
Waxaan dhowaan sahamin ka sameynay in ka badan 100 maamule oo heer sare ah, waxaan wareysiyo badan la yeelanay tafaariiqleyda iyo bixiyeyaasha tikniyoolajiyadda, iyo sidoo kale ka faa'iideysiga aqoonteenna ugu horreysa ee warbixinteena sanadlaha ee 2015, Aynu Helno Shakhsi: Shakhsiyeynta Qofka 'Omnichannel' ee Dunida Isku Xidhan. Warbixintu waxay bixisaa istiraatiijiyad isku-dhafan oo loogu talagalay isku-dhafka shakhsi ahaaneed ee tallaabo kasta oo safarka dukaameysiga ah - laga bilaabo suuq-geynta illaa iyo gaarsiinta alaabada.
Maxaad u daryeeshaa?
Dagaalkii lagu kasbaday macaamiisha iyo daacadnimada macaamiisha weligood ma noqon mid xoog badan oo macaamiisha weligood ma ahan kuwo dalbanaya. Iyada oo aan loo eegin kanaalka, macaamiishaadu waxay filayaan in farriimaha suuqgeynta ay is weydaarsanayaan, waxyaabaha ku jira ay faa'iido leeyihiin, iyo badeecooyinka iyo dalabyada inay la xiriiraan. Haddii aad tan sameyso midig, waxay si togan u saameyn doontaa khadkaaga hoose. Macaamiisha badankood waxay si farxad leh ula wadaagi doonaan macluumaadka shakhsiga ah ee naftooda ku saabsan haddii ay ogaadaan inay ku siin doonto waaya-aragnimadan la xiriirta iyo shaqsiyadeed.
Wax badan in la sameeyo, aad u yar…
Waqti? Kheyraadka? Aqoon-side? Soo iibso? Kuwani waa qaar ka mid ah caqabadaha ay xuseen tafaariiqlayaashu iyagoo isku dayaya inay hirgeliyaan istiraatiijiyad shaqsiyeed. Waxaa laga yaabaa in Talaabada Koowaad ee wax ka qabashada caqabadahaani ay tahay iibsiga maamulka. Marka maamulka sare uu fahmo sida shaqsinimaynta ay u kobcin karto dakhliga, waxaad sifiican ugu haysaa helitaanka ilaha iyo maalgelinta aad ubaahantahay.
Shakhsiyeyn shakhsi ahaaneed waa, waana inay noqotaa mudnaan
Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed waxay muhiimad gaar ah u leedahay ganacsiga calaamadaha, xitaa haddii aysan aqoonin sida loo sameeyo. 31% hawlwadeenada aan daraaseynay waxay dhaheen shaqsiyaysiinta shaqsiyadeed waxay kamid tahay sadexda ahmiyadooda ugu sareysa sanadka 2015.
Sida loo bilaabi lahaa
U kala jejebiso xubno hawleedyo abaabulan oo ku saabsan safarka dukaamaysiga. Ka fikir sidaad shakhsi ahaan khibrad ugu yeelan karto marxalad kasta.
Helitaanka iyada dareen. Maxaa ku soo jiita bartaada? Sideed ugu adeegsan kartaa waxa aad ka ogtahay macmiilkaaga inaad ku mashquuliso iyada.
Waxaad haysaa dareenkeeda. Hadda, sidee u isticmaali kartaa nuxurka shakhsi ahaaneed, dalabyada, farsamooyinka baayacmushtarka iyo hababka ugu fiican si aad uga dhigto mid ku hawlan oo xiraya iibka?
Ku raaxeyso xitaa xitaa intaa ka sii badan. Marka amarka la dhigo, sidee ayaad shakhsi uga dhigi kartaa keenista alaabada, baakadaha iyo adeegga macaamiisha si aad u sii adkeysid xiriirka aad la leedahay iyada?
Ka fogow boodh isir. Asturnaanta iyo nabadgelyadu waa walaac. Sidee baad u qabataa macluumaadkeeda oo aad u ilaalisaa?
Xabagta isku wada haysa. Xog noocee ah ayay tahay inaad soo qabato, sidee u ururisaa iyo, tan ugu muhiimsan, sidee uga faa'iideysataa si aad u abuurto khibrado shaqsiyeed.
Markaad soo marto jimicsiga fahamka sida aad ula shaqeeyn karto khibrada oo dhan, xulashooyinka ku saabsan sida loo sameeyo iyo tikniyoolajiyadda aad isticmaali karto way fududaan doonaan. Shaki yar ayaa ku jira in goobtani ay sii socon doonto oo ay tafaariiqleyda iyo astaamaha adeegsada oo sifeeya dadaalkooda shaqsiyadeed ay fursad wanaagsan ugu jiraan ku guuleysiga tartanka macaamiisha u beddelashada iyo daacadnimada kuwa aan samayn.
Ku saabsan FitForCommerce
FitForCommerce waa la-talin qurxoon oo ka caawisa ecommerce iyo ganacsiyada omnichannel inay go'aanno maalgashi caqli leh ka gaaraan istiraatiijiyadda, tikniyoolajiyadda, suuq-geynta, baayacmushtarka, howlaha, maaliyadeed, qaabeynta ururada iyo waxyaabo kale oo badan La-taliyayaasheena waa xirfadlayaal hore oo tafaariiqle ama calaamadeyn ah oo ka faa'iideysanaya khibradooda si ay u siiyaan hagitaan istiraatiijiyadeed iyo gacan ku haynta wax kasta oo loo baahan yahay si loo dhiso, loo kobciyo loona dardar geliyo ganacsigaaga.
FitForCommerce ayaa lagu soo bandhigi doonaa Shirka 'Digital Summit' ee ka socda Philadelphia Oktoobar 5th-7th ee qolka # 1051.
Tags: Safarka macaamiishaasturnaanta macaamiishaamniga macaamiishashakhsi ahaaneedshakhsi
Laura Swanson waa la-taliye sare oo ka tirsan FitForCommerce, iyada oo in ka badan 20 sano oo hoggaan ah tafaariiqyo badan oo kaladuwan, oo ku baahsan dhinacyo badan oo khibrad u leh - ka Iibsiga, Qorshaynta iyo Qoondaynta, Shaqaalaha, Hawlgallada Suuqgeynta, IT / Telecom iyo Macaamiil Istaraatijiyadda Omnichannel.
Waxaa jira Ton Qiime ah B2B ee Warbaahinta Bulshada